Nezvedu - Ningbo Jinghe Rotomolding Technology Co., Ltd.
Ningbo Jinghe Rotomolding Technology Co, Ltd inyanzvi yekugadzira rotomolding maindasitiri kweanopfuura makore gumi nemashanu.Takagadzira angangoita mazana matanhatu emagetsi uye tinoita zvigadzirwa zve200,000pcs kumusika wedu wekunze kwegore. With mupfumi experince uye vakaita zvakawanda zvakawanda anoumba, tinotenda kuti kambani yedu anogona kukodzera musiyano kudiwa iwe.
Ningbo Jinghe Rotomolding Technology Co., Ltd yave iri muotomolding indasitiri kweanopfuura makore gumi neshanu neanopfuura mazana matanhatu ma rotational mafomu anotengeswa pasi rese pagore. Inonyanya kupa Aluminium kukanda rotomolds, Aluminium CNC rotomolds.
Tine mapfumbamwe rotomolding michina, maviri CNC michina, manomwe achipupira furo muchina wedu. Zvakare, yedu yekuumba-kugadzira nzvimbo iri padyo nekugadzirwa kwepurasitiki, zvinoreva kuti tinogona kugadzirisa matambudziko eakaumbwa munguva pfupi. Kubudikidza nenzira iyoyo, mhando yeforoma uye zvinhu zvepurasitiki zvinogona kuve zvakanaka zvakavimbiswa.
Isu takazara, yakazara-sevhisi inogadzira mudiwa, kana iwe uine zvakafanana zvido, ndapota usazeze kutibata nesu.